२७ वर्षीया महिलाले जन्माइन् एकै साथ चार शिशु – उजेली न्यूज
प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७६, बुधबार १५:३१
२७ वर्षीया महिलाले चारजना शिशुहरूलाई एकै साथ जन्म दिएकी छन् । २७ वर्षीया कमला शाही (नाम परिवर्तन)ले बुधबार एकैपटक चारजना शिशुहरूलाई जन्म दिएको काठमाडौं मेडिकल कलेजकी प्रसुती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. चन्दा कार्कीले बताइन् ।
नेपालमा भने चारजना शिशुहरूलाई एकै साथ जन्म दिएको यो दोस्रो घटना भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । डा. कार्कीका अनुसार प्रति ४ लाखमा १ जनामा यस्तो घटना हुने गर्छ ।
तीनजना छोरा एक छोरीको जन्म
स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चार शिशु भएको देखिएपछि चिकित्सकहरुले उनको शल्यक्रिया गरेका थिए । उनको यो दोस्रो पटकको गर्भ हो । तीन छोरा र एक छोरीको जन्म भएको हो । शिशुहरुको स्वास्थ्य अवस्था अस्थिर छ । उनीहरुको एनआईसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
धनगढी निवासी साहीको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । उनको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै डेंगु पनि पोजेटिभ देखिएको छ । साहीको पहिलो सन्तानका रुपमा एक छोरी छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
Posted in प्रदेश ३, मुख्य समाचार, स्वास्थ्य
Previous: शिक्षक पाल्न जुम्लामा स्याउ बगैंँचा
Next: पसल चोरीको आरोपमा दुईजना पक्राउ